Smụnna nwanyị nke Ọfụma Na-adịgide Adịgide - WRSP
Nwanyị Nwanyị Na-adịru Mgbe Ebighị Ebi
SISTERS OF PERPETUAL INNDULGENCE TIMELINE
1979 (Eprel 14): Satọde Dị Nsọ. Ngosipụta mbụ mere na San Francisco. (Ememe ncheta a na-eme ememme Satọde ọ bụla, ụbọchị tupu ụbọchị ezumike nke Ndị Kraịst dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ofwa, ọ bụghị Eprel 14 ọ bụla).
1979 (August 19): Themụ nwanyị ndị nwanyị gosipụtara na mbụ dị ka iwu nke ndị nọn na Castro Street Fair.
1979-1980 (Oge oyi): Akpọrọ aha ahụ ka ụmụnne nwanyị nke Ọfụma Na-adịgide Adịgide.
1980 (March): Themụ nwanyị ahụ sonyeere mkpesa mbụ ha.
1980 (July 27): Iwu akwadoro Iwu na Iwu nke Iwu (ndị a metụtara naanị ụlọ San Francisco ozugbo ụlọ ndị ọzọ bidoro, mana ha nwere nkwupụta ozi ama ama ama nke mejupụtara ozi nke ndị otu niile) .
1981 (June 28): E hiwere ụlọ Toronto, na-amalite ọnụnọ nke iwu na Canada.
1981 (October 17): E hiwere ụlọ Sydney, na-amalite ọnụnọ nhazi nke iwu na Australia.
1982 (June): Mbipụta mbụ nke Kpọọ Fair! e bipụtara.
1986 (October 1): Torontolọ Toronto kwupụtara n'ihu ọha na ọ ga-emechi, na-akọwa na "Ihe onyonyo anyị emeela ka ọtụtụ ndị ghara ịhụ ọrụ anyị na-arụ."
1990-1991: E hiwere ụlọ na London, Paris, na Heidelberg (nke ikpeazụ mechara kwaga Berlin), na-amalite ọnụnọ nhazi nke iwu na Europe.
1990s (Oge mbu): E hiwere ụlọ Colombia, na-amalite ọnụnọ nhazi nke iwu na South America.
2000: E guzobere ụlọ Montevideo, Uruguay.
Smụ nwanyị ndị nwanyị na-aga n’ihu bụ iwu mba ụwa nke ndị nọn n’enweghi nkwado, ndị n’enweghi nkwado, ndị sista wepụtara onwe ha bụ ndị “gosipụtara” dịka Nwanne ha nwanyị “personas” ebe ọ bụla site n’oge ole na ole n’izu ruo otu ugboro n’ọnwa ma ọ bụ karịa mana ha na-ekwe nkwa ndụ. Agbanyeghi na otutu ndi otu ha choputara dika LGBTQ, iwu a na anabata ndi nwoke na nwoke na nwanyi. Mụ nwanyị ahụ na-achọpụta mmalite ha site na ohere ọpụpụ na Ista Satọdee n’afọ 1979. Dị ka “Sistory” (Nwanne nwanyị nke nwanyị) si kọọ, ike gwụrụ ndị enyi anyị n’ụbọchị ahụ wee kpebie iyipụ omume ndị nọn Roman Katọlik lara ezumike nka nke otu onye n’ime ha hapụrụ ihe nkiri dọkpụrụ ma gaa ije na ụfọdụ ebe nwoke nwere mmasị nwoke na San Francisco [Foto dị n'aka nri] (mpaghara Castro na Lands End, ebe ebe osimiri mara mma na-agba ọtọ). Ndi nọn doro anya, onye yi ocha pancake ọcha ma nwekwa obere igwe ihe eji egwuri egwu, mere ụdị nhịahụ ahụ nke na ha tụlere igosipụta ọzọ. N’ọnwa na-eso ya, otu onye so n’ìgwè mbụ ahụ kpọtara enyi ọzọ, ha gosipụta obi ụtọ n’egwuregwu softball nke ndị nwere mmasị nwoke. Sistory nwere na ha zuru show.
Ngosipụta nke atọ nke iwu ahụ mere n'August nke otu afọ ahụ, na Ngosipụta Castro Street. Abụọ n'ime atọ nke atọ gosipụtara na mbụ laghachiri n'àgwà, dịka onye sonyeere maka egwuregwu softball. Ha gbakwunyere otu enyi ọzọ iji mechie foto ahụ, otu n'ime ha tụkwara aro na ha kwesịrị inwe aha ma ọ bụghị naanị iyi uwe ndị nọn kama be ndị nọn. Ha kpọrọ aha Nwanna Nwaanyị Adhanarisvara (nke a na-akpọbu aha ya bụ Sister Vicious Power Hungry Bitch), Nwanna Nwanyị Solicitation (nke a na-akpọkarị Sista Hysterectoria), Nwanna Nwanyị Ozi Ala Ọzọ (nke a na-akpọzi Sister Soami), na Reverend Mother, ndị Abbess.
N'ime oge mgbụsị akwụkwọ, ụmụ nwanyị nwanyị ndị ọzọ natara ndị ọzọ, na-etinyekarị ha naanị maka ịse foto ma ọ bụ ịgba egwu (Nwanna nwanyị Hysterectoria bụ onye na-agụ egwú na onye na-agba egwu agba egwú). Sista Hysterectoria na Reverend Mother gara nzukọ mbụ Radical Faerie na Septemba, ọtụtụ n'ime mgbakwunye ọhụrụ na iwu ahụ sitere n'aka ndị ha zutere ebe ahụ. N'oge oyi nke 1979/1980, ndị nọn ọhụrụ kpebiri na aha ma kwupụta na ha bụ Sista nke Perpetual Indulgence. Ka ọ na-erule ọnwa Mach, ha abanyela na mkpesa izizi ha, na-etinye Rosary na Oge nke Nuklia Nuklia ka ha na-aga site na Golden Gate Park na ndị ngagharị iwe nuklia iji cheta ncheta otu afọ nke mbibi nuklia na-enweghị atụ na atọ Mile Island. N'oge ọkọchị ahụ, ihe karịrị otu afọ mgbe ntọala nke iwu ahụ, ndị otu ya kwadoro iwu ya na iwu nke usoro ya. Ọ bụ ezie na iwu ahụ dị oke mma ma bụrụ nke etinyere na nzukọ, yana iwu iwu ndị a metụtara naanị ụlọ San Francisco, nkwupụta ozi ekwuputara na akwụkwọ izizi a ka ewerela n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ site n'ụlọ ọ bụla nke ndị nwanyị gburugburu ụwa.
Mụnna nwanyị San Francisco nke mbụ rụrụ ọrụ dịgasị iche iche, site na mkpesa gaa n'ụdị na-achịkwa nke mmụọ na nyocha onwe onye maka ịrụ ọrụ maka inweta ego. Na 1982, site na ọrụ nke ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-arụ ọrụ na nlekọta ahụ ike na site na enyemaka nke onye na-ese foto na Toronto bụ Gary Ostrom, ụlọ ahụ mepụtara ụzọ mmekọrịta nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ kacha mma nke edere na nke ụmụ nwoke nwere mmasị nwoke. Nke a bụ otu nke iwu kachasị mkpa n'oge a, ọ bịara n'otu oge mgbe ọrịa ọhụrụ na-amalite ịgbasa ngwa ngwa site na obodo ha. Akwụkwọ nta ahụ, nke isiokwu ya Kpọọ Fair!, [Foto dị n'aka nri] depụtara n'etiti ọrịa ndị ọzọ na-ebute site ná mmekọahụ pneumocystis oyi baa na sarpooma Kaposi. Nanị ọnwa ole na ole ka e mesịrị, a bịara mara ihe ndị a dị ka ihe mgbaàmà nke ọrịa AIDS.
Iwu a gbasasiri ike site na 1980s na 1990s, n'agbanyeghị, ikekwe n'ihi mbibi ọrịa AIDS na obodo LGBTQ. Thelọ nke abụọ a ga-ehiwe malitere na Toronto na June 1981, na nke atọ na Sydney na Ọktọba. N'ịgbaso ntọala ụlọ nke Melbourne na 1983, iwu ahụ gbasara na Australia ma nwekwa ọnụnọ dị mkpirikpi na New Zealand na mbido 1990s. Otú ọ dị, ụlọ Toronto chere ihu na mmegide ọha na eze ọ gbalịsiri ike imeri, gụnyere site n'aka onye ndu nwoke nwere mmasị nwoke bụ Brent Hawkes, onye pastọ nke ọgbakọ Toronto nke Churchlọ Nzukọ Obodo Metropolitan. N’ọnwa Ọktọba 1986 ụlọ ahụ mara ọkwa na ọ na-emechi.
Iwu ahụ malitere ịgbasa na United States na njedebe 1980s, yana ntọala ụlọ na Seattle na 1987. offọdụ ụlọ ọhụrụ ahụ jigidere ọgụ siri ike nke ụlọ San Francisco bịara mara; Ngosipụta mbụ nke ụlọ ahụ na New York City, dịka ọmụmaatụ, mere na 1989 Kwụsị protestka ngagharị iwe na Katidral Saint Patrick nke ndị ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) na WHAM haziri! (Healthmụ nwanyị Health Action na Mobilization).
Oge nke afọ iri malitere mmalite nke iwu na Europe. Otu Sista Ọstrelia aha ya bụ Mama Ethyl Dreads-a-Flashback (onye a makwaara Nwanna Nwaanyị Mary-Anna Lingus) bịara Lọndọn dị ka onye ozi ala ọzọ ma hiwe ụlọ mbụ nke mepere emepe n’obodo ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ, site na nkwado nke ụlọ San Francisco, ụlọ ahụ dị na Paris gbanwere ọnọdụ; emere Mass Mass ya na June, 1991. Ka ọnwa ole na ole gachara, sitere n'ike mmụọ nsọ nke ide akwụkwọ nke themụ nwanyị site n'aka onye nta akụkọ nwoke nwere mmasị nwoke Mark Thompson, otu Smụnna nwanyị bidoro n'adabereghị na Heidelberg; ndị a mechara bụrụ ndị guzobere ụlọ ụlọ Berlin.
Ikekwe dị ka nsonaazụ nke ogbako nne Ethyl nyere na International Lesbian and Gay Association (ILGA; ugbu a nzukọ International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, na Intersex Association) na 1990, ma ọ bụ ikekwe site na mmetụta ndị ọzọ, ụlọ e guzobere na Colombia n'isi 1990. Ya na ụlọ ndị ọzọ nwere obere mmekọrịta ọ bụla, ikekwe n'ihi ụkọ nri nke ndị na-asụ Spanish n'asụsụ n'usoro, ma si n'afọ iri ma ọ bụ iri na ise gafee. Ka ọ dịgodị, na 2000 ụlọ e guzobere na Montevideo, Uruguay nke ka na-arụ ọrụ ka ọ dị n'oge a na-ede akwụkwọ a, na ụlọ ọzọ (nke a na-amatabeghị nke ọma na usoro ụwa) malitere na Buenos Aires n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị. Smụnna nwanyị bidokwara ịlaghachi Canada n'afọ 2000, na-arụ ọrụ ndị ọzọ (ụlọ ndị e guzobere) na Toronto, Vancouver, Montréal, Edmonton; ka ọ na-ede akwụkwọ a, Vancouver na Montréal na-anabatazi ụlọ ndị zuru oke.
Themụ nwanyị ndị nwanyị na-enwe mmekọahụ na-aga agha abụghị okpukpe ma ọ bụ nzukọ ime mmụọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị otu nọ na-ahụ okwu mmụọ, ihe oriri, na ọbụnadị mmepe site na ozi ha. Ndị otu n’otu n’usoro ahụ nọ n’okpukpe nke ha nkwa ndị a na-eme n'ọtụtụ okpukpe (na enweghị ya) na-anọchite anya obodo ndị gbara ha gburugburu. [Foto dị n'aka nri] Iwu a bụ ebe obibi nye ndị ekweghị na Chukwu, ndị ekweghị na Chukwu, ndị "mmụọ mana ọ bụghị nke okpukperechi", ndị ụka Kraịst, ndị Roman Katọlik, Unitarian Universalists, Juu, neo-Pagans, Buddhist, ndị Alakụba, ndị Hindu, na ndị Sikh oge ụfọdụ, n'etiti ndị ọzọ. Iwu a ka na-acha ọcha, ọtụtụ (ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile) ndị na-eme omenala ọdịnala nke na-esighi na Europe na mpaghara ndị ọbịa ya na-agbanwe.
Na mgbakwunye na ozi ha, ihe ndị otu n'usoro iwu na-ekerịta gburugburu ụwa bụ ebumnuche ha, sitere na iwu mbụ San Francisco: "nkwupụta nke ọ universalụ zuru ụwa ọnụ na njedebe nke ikpe amamikpe." Fọdụ ụlọ na iwu mpaghara na-agbakwụnye na nke a: Mkpebi ndị a bụ ụkpụrụ nduzi maka ọtụtụ mkpebi ndị otu n'otu na ụlọ niile na-eme, na-adị kwa ụbọchị.
Akụkọ dị nsọ n'usoro a na-ejikarị ụdị Sistory, a na-atụkarị anya ka ndị otu guzobere mụta akụkọ mmalite nke usoro ahụ wee gosipụta ikike ịmegharị ndị ọzọ. Akụkọ Apocryphal na-ekerekwa òkè n'ịkpụzi echiche ndị otu banyere usoro ahụ. N'ime akụkọ apọkrịfa ndị kacha ewu ewu na ụlọ ndị US bụ nkwupụta na ndị Sista nọ na Ndepụta Papal (ma ọ bụ, na-ebuli elu, Papal Top Ten List) nke ndị jụrụ okwukwe na Chọọchị Roman Katọlik, na nkwupụta na ndị mbụ so n'usoro malitere iyi ọcha pancake etemeete n'ihi na ha niile bụ ndị ọrụ mmekọahụ na-atụ egwu mmetụta na azụmahịa ha ma ọ bụrụ na ndị ahịa ha ghọtara na ha na-eji ejiji na dọrọ n'akụkụ. Abughi akuko, ka o doo anya, bu eziokwu.
Ozi ndị nwanyị na-agbanwe nke ukwuu site n'ụlọ ruo n'ụlọ, mana ọ na-elekwasị anya na mmegharị obodo, sitere na agụmakwụkwọ na ịchọta ego na mkpesa n'okporo ámá. N'ịbụ ndị akụkụ na-eto eto nke obodo San Francisco na-enwe ọbịbịa na ntiwapụ nke ọrịa AIDS na obodo ahụ, ndị nwanyị na-aga n'ihu na-elekwasị anya na mmekọrịta nwoke na nwanyị, ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-adịghị mma na-enwe mmekọahụ na ịkwado, yana ọtụtụ ụlọ kesaa ndi emelitere, okike-gunyere, na otutu asusu nke Kpọọ Fair! tinyere inwe mmekọahụ nke na-adịghị ize ndụ, ọtụtụ na-ebu obere akpa ha.
Dị ka ọtụtụ òtù, ndị Sista ahụ eguzobewo ememe maka ndị na-enweta ọnọdụ dị iche iche n'ime iwu ahụ. Ndị a na-agụnye emume dị elu maka ndị mmadụ na-agbago n'ọkwá n'ime usoro na ememe nke ịmịnye mmadụ maka ndị na-aghọ ndị nsọ (n'adịghị ka Chọọchị Roman Katọlik, na Sisters of Perpetual Indulgence mmadụ ekwesịghị ịnwụ iji nweta ọnọdụ a).
Housesfọdụ ụlọ nke ụmụ nwanyị na-emekwa emume maka ọha na eze, gụnyere ngọzi na emume dị ọcha, mmechi iwu, na Mass (ọ bụ ezie na ọ bụghị, iji doo anya, ndị Roman Katọlik).
Akụkọ banyere oge mbụ nke ndị nwanyị jikọtara ya na nke Radical Faeries, ọhụụ okpukpe ọhụụ maka ndị nwoke nwere mmasị nwoke nke Harry Hay, Don Kilhefner, na Mitch Walker guzobere na 1979. Maka nke a, ọkachasị na US, ọtụtụ emume Nwanne nwanyị nwere ọhụụ neo-Pagan dị ka ịkpọ oku na mbido emume ahụ na ịkpọku Chi nwanyị n'ụdị ya dị iche iche.
Ikekwe nke kacha pụta ìhè n'omume ndị nwanyị bụ ọnụnọ nke ihe m na-akpọ "akwa parody," nke otu ndị a na-emegbu emegbu na-akpọ akụkụ ọdịnala kpọrọ ihe nke ụlọ mmegbu ma n'otu oge ahụ na-azọrọ akụkụ ndị ọzọ nke otu ụlọ ọrụ ahụ. Smụ nwanyị ahụ na-akpọ Roman Katọlik egwu, ma n'otu oge ahụ ha dị oke kpọrọ ihe na ha bụ ihe nke ndị nọn, naanị ndị Roman Katọlik. Yabụ mgbe Mass Sisterly, dị ka Mass Against Papal Bigotry [Foto dị n'aka nri] nke emere iji kwanyere ọbịbịa Pope John Paul II na San Francisco na 1987 na San Francisco, ga-enwe ihe doro anya nke ịkpa ọchị na ngagharị iwe (njikọta a na-asọpụrụ oge na njedebe queer) o nwekwara ihe ndị jọgburu onwe ha. Emere na ama ama ama na ebe njem nleta na San Francisco, ụmụ nwanyị ahụ gụnyere ememe dị egwu na-agbapụ Pope John Paul II nke ndị mmụọ ọjọọ nke homophobia, nkesa ihe mkpuchi ọla edo na-acha uhie uhie na nnukwu tray site na acolytes na-acha uhie uhie, na canonization nke igbu ọchụ na onye ndu nwoke nwere mmasị nwoke Harvey Milk. Ndị condom ahụ laghachiri na Paris Investiture Mass na 1991 dị ka "Onye Nzọpụta Condom," yana otu iyi siri ike nke ndị sonyere na ọgbakọ condom a na-eme iji nwee mmekọrịta dị mma dị ka ụzọ isi sọpụrụ ịdị nsọ nke ndụ na ahụ ndị mmekọ ha. . Dị ka ndị ọkà mmụta, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị oke egwu na etu ihe siri dị njọ na-etinye aka na nkwado nke nwoke nwere mmasị nwoke onye Juu na-eme ngagharị iwe megide ọbịbịa nke Pope homophobic, ma ọ bụ na nnọchi nke udo udo na nkwa Jizọs nke ebighi ebi ndu ya na condom ya na nkwa ya (ma obu ihe a na - emegide homophobic) iji chebe oria nke na - egbu otutu mmadu kwa ubochi.
Na-agagharị n’ahịrị dị n’agbata ọgba aghara aghara aghara na otu Radical Faerie, n’otu aka, yana ihe eji etinye aka na steeti maka ndị otu obodo, ndị Sista ahụ bụ ndị a haziri ahazi ma hazie mpaghara. Ọ bụ ezie na ụlọ San Francisco nwere akara ụghalaahịa maka aha iwu ahụ na United States n'ihi esemokwu n'etiti ndị mmadụ karịa ndụ na mbido-etiti 1980s, ọ na-eji ike a eme ihe naanị mgbe aha ụmụnna nwanyị ahụ dị oke eji ya eme ihe (dika ndi otu ndi otu homophobic ndi otu Kraist na-acho ndi a tọghatara na Chicago's Boystown n'etiti 2000s, dika ihe omuma edere site na iwu).
A haziri ndị Sista ahụ ka ọ bụrụ obodo “obodo” ma ọ bụ mpaghara. nke a bu okwu nka na egosi egosiputa isi, d’eji usoro adighi biri. Na North America, ụlọ ga-enwerịrị oge uto dịka ọhaneze tupu ọ ghọọ ụlọ nkwupụta zuru oke. N'ime oge a, a na-eduzi ha ma, ọ bụrụ na ha ga-aga nke ọma, mechara kwado ha site na ndị a họpụtara ahọpụta, ndị nnọchi anya a maara dị ka United Nuns 'Privy Council, ma ọ bụ UNPC. Ọ bụ ezie na n'oge ụfọdụ n'oge gara aga ụfọdụ iwu mpaghara ma ọ bụ nke mba (dịka Iwu French na Iwu German) nwere otu alọ nne na otu Archabbess ma ọ bụ Archmother nwere ikike iji kwado ma kwado ụlọ ọhụrụ, ndị usoro sara mbara ma n'ezie usoro kachasị pụta ìhè taa bụ otu n'ime obodo kwụụrụ onwe ya maka ụlọ. Mgbe ụlọ ọhụrụ malitere, ndị otu ya na-eritekarị uru site na nlekọta nke ụlọ guzobere na ndị okenye ndị ọzọ, mana oge ụfọdụ ụlọ na-ebido dabere na ihe ha nwere ike ịmụta site na akwụkwọ, Intanet, na oge ọhụụ na nzukọ ọmụmụ na mgbakọ mba ụwa.
Ọtụtụ ụlọ na-agbaso usoro ihe eji arụ ọrụ nke ụlọ na-ejigide ma ọ bụ na-erughị oke na ike nke ikike dị na ọkwa ọ bụla nke ndị isi. Ndị nwere mmasị ịbanye n'usoro ahụ na-amalite dị ka ndị Aspirants, ndị na-ahụ ọrụ nke ụlọ ha họọrọ maka ọnwa ole na ole tupu ha arịọ ịrị elu n'ọkwa Postulant. Niile elu na-kpebiri site na votu nke n'ụzọ zuru ezu kwupụtara na ndị òtù nke ụlọ, ma ọ bụ “FP si.” Ndị na-esote akwụkwọ na-amalite ịmụ ọrụ nke usoro ahụ n'okpuru ndụmọdụ nke otu ma ọ bụ mmadụ abụọ kwupụtara na ha bụ ndị otu, ma ọ bụ dịka Nwanna Nwanyị ma ọ bụ dịka Onye Nche. Ndị nke a bụ ndị nke usoro ahụ na-arụ ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ n'azụ na ndị na-eje ozi dị ka mgbakwunye agbakwunyere maka ụmụ nwanyị na mpaghara ebe mmekọrịta mmekọahụ na-achọghị site na ndị otu obodo ma ọ bụ ndị mmekọ nwoke na nwanyị na ime ihe ike transphobic bụ nchegbu. A na-ebuli ndị isi na-emecha ọkwa nke ọzụzụ ha ka afọ ojuju ụlọ ha bụrụ Novice Sisters na Novice Guards, na-esite n'aka onye ndụmọdụ FP ma ọ bụ karịa. Mgbe oge dị n'etiti ọnwa isii na afọ abụọ yana gụnyere gụnyere ịmecha ọrụ ọhụụ, ndị novice nwere ike ịkwalite n'ọkwá zuru oke, na-ewere aha Nwanna Nwanyị ma ọ bụ Nche na, maka ụmụ nwanyị, ihe ùgwù nke iyi ojii mkpuchi (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ chọrọ).
N'ịbụ ndị buru ibu, gbasaa ebe niile, ma nwee ọmarịcha nzukọ na -emepụta ọtụtụ nsogbu usoro maka iwu ahụ, sitere na nkwukọrịta na atumatu ndị otu (Dịka ọmụmaatụ, onye a chụpụrụ n'otu ụlọ ga-abụ onye Aspirant na nke ọzọ, yana kedu ka ụlọ ọhụrụ ahụ ga-esi mara n'ụzọ ọ bụla?). Ọdịdị dị otu a n'etiti ụlọ nwekwara ike ịkwado esemokwu, na n'ezie obodo ole na ole bụ ndị amaara ama maka ịnọ n'ụlọ ọtụtụ, ụlọ asọmpi n'otu oge n'ihi mbipụta a. N'aka nke ọzọ, agbanyeghị usoro ịtụ vootu onye kwuo uche ya n'ọtụtụ ụlọ mmadụ, ọnụnọ otu, ọkwa onye isi ụlọ (Nne, Abbess, Prioress, ma ọ bụ ihe ọbụla nwere ike ịbụ aha) na-emepe ụlọ ruo ihe egwu nke ọchịchị aka ike. Obere obere ụlọ ụfọdụ nwere ike ime ka ha bụrụ otu, ma ọ bụ mee ka ha ghara ịdaba ma ọ bụrụ na otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ kwesịrị ịhapụ iwu n'ihi nkwa ndị ọzọ ma ọ bụ ịkwaga.
Ndị Sista ahụ bidoro dịka "iwu ka ndị nọn nwoke na-edina nwoke," mkpụrụokwu nke bidoro ịkọwa ihe karịa ịkọwapụta ya. Ha bidoro n'obodo nke ndị agbata obi ya kachasị nwee mmekọ nwoke na nwoke na-achị ebe ahụ, n'oge mgbe ekwenyesiri ike n'ihe gbasara nwoke na nwanyị (nke akpọrọ "Castro clone" anya) jupụtara ebe ahụ. Agbanyeghị na mgbọrọgwụ ha sitere na nnabata, mmekọ mmekọ nwoke na nwoke nke ngalaba ụfọdụ nke Gay Liberation Front na mbido na nnọgidesi ike nke ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị nwere agba, ụmụ nwanyị cisgender, na ndị transgender n'ime usoro ahụ, mmalite ndị a (emegharịrị n'obodo ndị ọzọ ebe iwu ahụ gbanyere mkpọrọgwụ na 1980s na mbido 1990) agbalitela mmegharị onwe onye nke mgbanwe nke agbụrụ, mmekọahụ, na njirimara nwoke na nwanyị n'usoro. Housesfọdụ ụlọ emeela ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa ịgbasa ọnụ ọgụgụ ndị ha na-eje ozi na ndị ha na-esite na ha isonye na ya, na mbọ ndị a na-akwụ ụgwọ ihe opekata mpe n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Themụ nwanyị ahụ na-ewetakwa ndị ọkà mmụta okpukpe ezigbo nsogbu. Ha doro nnọọ anya, dịka ọmụmaatụ, na-azọrọ onwe ha ọrụ nọn. Ma ọtụtụ ndị na-ekiri ihe na ndị na-ekwu okwu enweghị ike ịnakwere nkwupụta a, na-ekwusi ike itinye "nọn" na akara nhoputa mgbe ha na-ede banyere iwu ahụ. Kedu ihe ga-esi na ya pụta maka ubi ịnara ndị Sista na okwu ha? Dị ka ihe atụ, ndị ọkà mmụta adịghị ajụ ọnọdụ nke ndị nọn Jain ma ọ bụ ndị nọn Buddha, ọbụna ná mba ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ ebe ndị nọn na Roman Katọlik dị. Anyị ga-eme nke ọma ịjụ otu nghọta anyị banyere ndị nọn, ma ọ bụ nke ndị kwere nkwa n'okwukwe n'ozuzu ha, nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na anyị jụkwara mkpesa ịgbagha ma ọ bụ wepụ nkwupụta nke ndị Sista n'okwu a "nọn." N'otu aka ahụ, ndị Sista ahụ na-agwa anyị ka anyị chee n'ụzọ dị mgbagwoju anya banyere ebe okpukpe dị. Ndị Sista abụghị okpukperechi, agbanyeghị etu mmadụ si akọwapụta okwu ahụ, mana okpukperechi (ọzọ, akọwapụtagoro) na-eme ma dị ezigbo mkpa nye ndị nwanyị. Mgbalị iji pigeonhole iwu dị ka "okpukpe" ma ọ bụ "nke ụwa" na-akụziri anyị ihe banyere echiche nke anyị karịa banyere Sisters of Perpetual Indulgence. Ndị nọn a, m nyefere, dị mma ka anyị chee echiche.
Foto # 1: (Otu aka nri si n'elu) Nwanna Adhanarisvara, Nwanna nwanyị Roz Erection, na Nwanna Nwanyị Nwanyị Ala ọzọ na ngosipụta mbụ nke Smụ nwanyị nke Perpetual Indulgence, Ista Saturday 1979. E weghachiri ya site na ikike nke Soami Archive.
Foto # 2: Smụnna nwanyị nke akwụkwọ nta ọfụma nke isiokwu ya bụ nke isiokwu ya Kpọọ Fair!
Foto # 3: Smụ nwanyị nke Perpetual Indulgence otu foto.
Foto # 4: (Aka ekpe gaa aka nri) Michael Hare (ịmape amaghi) dị ka Pope John Paul II, onye akpọrọ Fag Nun Assunta Femia, onye bu ụzọ nke iwu na Nwanna Nwanyị Ozi Ala Ọzọ “nne na ndụ okpukpe,” na Nwanna Nwanyị Vicious Power Hungry Bitch na 1987 Papal Mass. Foto nke John Entwistle sere. Edegharịrị site na ikikere nke Archive Soami.
** A na-adọta profaịlụ na-esonụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na nchọpụta ochie na nyocha agbụrụ. Maka mkparịta ụka zuru oke nke nyocha a, lee Melissa M. Wilcox, Queer Nuns: Okpukpe, Activism, na Serious Parody (Mahadum New York Press, 2018).
Onu ogugu ndi oka mmuta di na ndi nwanyi, ebe otutu ndi n’enye nkọwa n’agwa ha dika ndi otu ihe nkiri n’okporo ama ma obu ndi na adighi anya nke ndi eze. Ọtụtụ na-akpọ ha "ndị nọn" (na nhoputa akara) ma leghara ma ọ bụ na-eleghara anya na ndị Sista ahụ na-ekwu na ha bụ ndị nọn n'ihe niile dị mkpa, ọbụlagodi na ha na-etinyekwa aka na ọdịnala Roman Katọlik. N'ihi ya, ọ bụ ezie na ndị nwanyị na-apụta n'ọbịbịa na ọtụtụ nchọpụta banyere ime ihe ike na akụkọ ntụrụndụ obodo, a na-ele ha anya na ha ruru ihe karịrị otu ahịrịokwu na akwụkwọ niile.
Ọrụ ndị e bipụtara nke ndị nwanyị na-anata echiche zuru oke na nke ziri ezi gụnyere:
Altman, Dennis. N'afọ 1986. Ọrịa AIDS na Uche America. New York: Anchor-Doubleday.
Glenn, Cathy B. 2003. "Na-egbochi Ọchịchị Ahụ (Dị Nsọ): Constụle Ọchịchị Ọdịbendị Na-eme Omume nke istersmụnna Nwaanyị nke Ọchịchị Ọjọọ," Theory & Omume 7 (1): np (ihe ntanetị).
Lucas, Ian. "Agba nke anya Ya: Polari na ụmụnne nwanyị nke Ọfụma Na-adịgide Adịgide." Na Ahịrịrị nke Queerly: Asụsụ, Okike, na Mmekọahụ, Anna Livia na Kira Hall dere, 85–94. New York: Mahadum Oxford University, 1997.
Wilcox, Melissa M. 2018. Ihe ndi ozo: Okpukpe, Ime ihe ike, na egwu egwu. New York: New York University Press.
Wilcox, Melissa M. 2016. "Nkewa nke Churchka na Mmekọahụ: Ndị Katọlik na-eme mgbanwe na ụmụ nwanyị nke Pụrụ Iche Iche Iche." e-misférica 12 (2): np (ihe ntanetị).
Humperpickle, Nwanyị Titania. "Osisi." Nweta site na http://perpetualindulgence.org/tree/ na 20 December 2018.
Newman, Marjorie, dir. Omume a gbanwere. Nkeji 3 Mahadum Stanford, 1981. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=q0pNMNOT82M na 20 December 2018.
“Smụnna Ndị Nwanyị Na-eme Ihe Ọjọọ.” Nweta site na https://vimeo.com/thesisters na 20 December 2018.